Mandihy Sy Mijoro Ho Amin’ny Rariny Any Azia Atsimo Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Febroary 2014 7:54 GMT
Mpikatroka Filipino manatontosa ny fanoherana amin'ny alalan'ny dihy ‘One Billion Rising’ [Iray Miliara Mijoro] eo akaikin'ny lapan'ny filohan'i Philippines manery mba hanosehana vola bebe kokoa amin'ny resaka sosialy.
Notohanan'ny vondron'olona sy olon-tsotra maro tany amin'ny renim-paritr'i Azia Atsimo Atsinanana ny hetsika ‘One Billion Rising’ [Iray Miliara Mijoro]. Tamin'ity taona ity, novelarina ny lohahevitra hampidirana ny antso ho amin'ny rariny avy amin'ny fitakiana manokana hamaranana ny herisetra atao amin'ny vehivavy.
Tany Kambodza, nasongadina nandritra ny fikarakarana ny hetsika ny herisetra natao tamin'ny mpiasan'ny fanenoman-damba nitokona:
… nisy ny famoretana sy ny herisetra tamin'ny mpiasan'ny fanenoman-damba izay nanao fihetsiketseha-panoherana mitaky ny hanatsarana ny sehatry ny asa fa niteraka (faharatrana) maro. Nisy vehivavy mpikatroka miaro ny zo hanantany ihany koa nodarohana tsy misy indra-fo, nosamborina ary nogadraina tsy misy famotorana. Tsy nisy fanonerana nomena ireo lasibatra hatramin'izao ary tsy nentina tany amin'ny fitsarana ireo nanao izany
Saingy nosakanan'ny polisy rehefa noheverina ho manohintohina ny filaminana ny fandehandehanana amin'ny bisikileta.
Nosakanan'ny polisy ny hetsika am-bisikileta tao Kambodza
Any Indonezia, notontosaina tany amin'ny tanàna fito manerana ny firenena ny ‘One Billion Rising’ [Iray Miliara Mijoro].
Dihy ‘One Billion Rising’ [Iray Miliara Mijoro] any amin'ny tanàna fito any Indonezia
‘Rise for Justice’ (Mijoro ho amin'ny rariny) ao Indonezia
Fikambanam-behivavin'i Hai Hau ao amin'ny faritanin'i Nam Dinh, Vietnam no nitarika ny dihin'ny ‘One Billion Rising’ [Iray miliara Mijoro]. Eto ambany ny lahatsarin'ny famerenana nataon-dry zareo:
Any Thailand, nanohana ny fanentanana ‘One Billion Rising’ [Iray Miliara Mijoro] ny mpianatry ny Oniversite Chiang Mai. Eto ambany ny video tamin'ny nanaovan-dry zareo izany:
Sary hafa an'ny ‘One Billion Rising’ (Iray Miliara Mijoro) tany Chiang Mai, Thailand. Sary avy amin'ny pejy Facebook an'i Lisa Kerry
Any Philippines, nandrindra ny fanentanana ‘One Billion Rising’ [Iray Miliara Mijoro] ny vondrom-behivavy Gabriela ary afa-nanetsika vehivavy an'arivony tany amin'ny faritra maro samihafan'ny firenena. Joms Salvador, sekretera jeneralin'ny Gabriela, nanazava ny mahazavadehibe ny fandringanana ny endrika rehetran'ny herisetra atao amin'ny vehivavy:
Indraindray noho ny tsimatimanotan'ny fahantrana, dia mitady tsy hanohina ny fon'ny olona intsony ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Tokony ho tsapantsika fa tsy tokony ho fenitra ny toe-draharaha tahaka izany ary mila ovaina izany. Mila miara-mihetsika isika ary manao izay hahatonga ny antso ataontsika ho mafy kokoa satria hiharatsy hatrany hatrany io rah ambola mangina isika sy mijery miraviravy tanana fotsiny.
Tao an-tanànan'i Davao miorina any atsimon'ny firenena, nivoitra tanatin'ny ady amin'ny ho amin'ny rariny mahomby ny resaka kolikoly:
Amin'izao firenena difotry ny kolikoly izao indrindra fa amin'ny fomba fampiasana ny volam-panjakana, dia tokony miaraka mandihy aminay avokoa ny mpandoa hetra rehetra hiantso ny hisian'ny rariny
‘Rariny’ no lohahevitry ny ‘One Billion Rising'(Iray Miliara Mijoro) amin'ity taona ity
‘Akaro, Avoahy, Dihy’ ao an-tanànan'i Davao, miorina any atsimon'ny nosy Mindanao any Philippines
‘Rariny ho an'ny tra-boinan'ny rivodoza Haiyan’ iray amin'ny fitakiana nandritra ny fanentanana
Mpiasa mihiaka ny hampiakarana ny karama izay ao anatin'ny fanentanana hisian'ny rariny ara-piarahamonina